कर्मचारीहरु राज्यकोषकाे अरबौँ रुपैयाँ लिन्छन् काम नगरी ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार कर्मचारीहरु राज्यकोषकाे अरबौँ रुपैयाँ लिन्छन् काम नगरी !
on: १४ पुष २०७४, शुक्रबार ०९:१३ In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गए वापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर अफिस जाने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले यस्तै प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय एउटा उदाहरणमात्र हो, विशेष कामका नाममा प्रोत्साहन भत्ता खाने मन्त्रालय र कार्यालय मुलुकभरमा २६ वटा छन् ।
विगतमा सरकारी कर्मचारीको तलब निकै कम भए पनि पछिल्लो समय त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले अधिकांश निजी क्षेत्रमा भन्दा सरकारले तलब र सेवासुविधा राम्रो दिएको छ । तल्लो तहका कर्मचारीले पनि कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवासुविधा पाउने भएकाले अहिलेको पुस्ता सरकारी जागिर खान आकर्षित छ । नागरिक दैनिकबाट
१४ पुष २०७४, शुक्रबार ०९:१३